UCL မှာ အမှတ်စရတဲ့ အေစီ ၊ အံ့ဖွယ် အိုင်ယက်စ် ၊ အဆင့်ကျသွားတဲ့ PSG . . . တို့ရဲ့ ပွဲပြီး ပြောစကားများ - xyznews.co
UCL မှာ အမှတ်စရတဲ့ အေစီ ၊ အံ့ဖွယ် အိုင်ယက်စ် ၊ အဆင့်ကျသွားတဲ့ PSG . . . တို့ရဲ့ ပွဲပြီး ပြောစကားများ
အေစီမီလန် ကတော့ မနေ့ညက ပေါ်တို နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ၁ ဂိုးစီ သရေကျပြီး ဒီနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် မှာ အမှတ် စတင် ရရှိ သွားခဲ့ပါပြီ ။ ပေါ်တို က ပွဲချိန် ၆ မိနစ် ကတည်းက ဂိုးစသွင်း ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အေစီမီလန် က ၆၁ မိနစ်မှာ ပေါ်တို ကစားသမားရဲ့ O.G ကနေ ချေပဂိုး ပြန်လည် ရရှိ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
“ချန်ပီယံလိဂ် ကို အမြဲတမ်းလိုလို ကစားနေရတဲ့ လီဗာပူး ၊ အက်သလက်တီကို ၊ ပေါ်တိုတို့လို အသင်းမျိုးနဲ့ ကစားရတာက တကယ်ခက်ခဲ ပါတယ် ။ ချန်ပီယံလိဂ် မှာက အတွေ့အကြုံက အရမ်း အရေးကြီးလို့ပါ ။ ကျွန်တော်တို့ က ဒီပြိုင်ပွဲ နဲ့ ဝေးနေတာ ကြာပါပြီ ၊ လူငယ်လေးတွေ ဆိုရင် အတွေ့ အကြုံ နုပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွက် ဆင်ခြေတော့ မပေးချင်ပါဘူး ။ ကံလေး နည်းနည်းလောက် လိုအပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်” – Oliver Giroud ( AC Milan Forward )
“ဒုတိယပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ပိုကောင်း ခဲ့ပါတယ် ။ ဘောလုံးနဲ့ အရွေ့တွေ ပိုကောင်းခဲ့သလို ပြိုင်ဘက် ကိုလည်း ဖိအားအများကြီး ပေးခွင့် မပြုခဲ့ ပါဘူး ။ အသင်းက ပုံစံကောင်း ရနေပါပြီ ။ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ပထမဆုံး နိုင်ပွဲ ရဖို့ လုပ်သွားမှာပါ ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့မှာ ပေါ့” – Pioli ( AC Milan Coach )
နယ်သာလန် ကလပ် အိုင်ယက်စ် ကတော့ ဂျာမန်ထိပ်သီး ဒေါ့မွန် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစားခဲ့သလို အဝေးကွင်း မှာလည်း ၃-၁ နဲ့ အနိုင်ယူပြ ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် အိုင်ယက်စ် ဟာ ပွဲစဉ် ၄ အပြီးမှာတင် နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ တိုးတက် ချင်တယ် ဆိုရင် ၊ ပိုကောင်းတဲ့ အသင်း ဖြစ်လာချင်တယ် ဆိုရင် ဒီနေ့ ပွဲရဲ့ ပထမပိုင်း ကစားပုံ ကနေ သင်ယူလေ့လာ ရမှာပါ ။ ပထမပိုင်းမှာ အမှားတွေ အများကြီး လုပ်မိ ခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက် ကို အားဖြည့်ပေး သလို ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အရည်အသွေး ရှိတဲ့ အသင်း တသင်း ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ အင်အားကြီး အသင်းတွေကို အနိုင်ယူနိုင်ကြောင်း ကို ပြန်ပြီး ပြသ နိုင်ခဲ့ပါတယ်” – Erik Ten Hag ( Ajax Coach )
ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစား နေတဲ့ PSG ကတော့ ယမန်နေ့ က ဂျာမန် ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မန်စီးတီး က ကျော်တက် သွားခဲ့ပြီး အုပ်စု ပထမ နေရာ ရဖို့ အတွက် မန်စီးတီး နဲ့ ကစားမယ့် ပွဲကို အနိုင် ရဖို့ လိုအပ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
“မန်စီးတီး နောက်ကို ရောက်သွားတာက ကျွန်တော်တို့ ကို ဘာမှ ပြောင်းလဲ မသွားစေပါဘူး ။ ပွဲတိုင်းကို အနိုင် ကစားပြီး အုပ်စု ပထမ နေရာကနေ နောက်တဆင့် တက်ဖို့ က ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပါ ။ ဒါကို အမြဲ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်”
“ဒီပွဲ အတွက် ကျွန်တော်တို့ သေချာ ပြန်ပြီး သုံးသပ် ရပါမယ် ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေမှာလည်း ကိုယ့် ပြိုင်ဘက် ဟာ ထိုက်တန်တယ် ဆိုတာကို ( အမှတ်ရဖို့ ) လက်ခံ ရမှာပါ ။ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ အားလုံးက အသင်းကောင်းတွေ ချည်းပါပဲ” – Pochettion ( PSG Coach )
Previous Article ကလပ် သမိုင်းကြောင်း တလျှောက် ရှုံးပွဲ လုံးဝမရှိတဲ့ ပွဲဆက်အများဆုံး စံချိန်ကို အမှီလိုက်ပြလိုက်တဲ့ ယာဂန် ကလော့ပ်
Next Article မက်ဂွဲယား ဆီက အသင်းခေါင်းဆောင် လက်ပတ်ကို လွှဲယူဖို့ ထိုက်တန်သူကို ပြသခဲ့တဲ့ အတ္တလန်တာ နဲ့ ပွဲ ဥမင်အတွင်းက ပုံရိပ်များ